Oge Faraday: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụgwọ ọkụ eletrik | Ngwaike efu
Isaac | 17/09/2021 09:00 | mmụta
Dị ka oge ndị ọzọ, anyị ekwuola banyere ajụjụ ndị ọzọ dị mkpa na ngalaba elektrọnik na ọkụ eletrik, dịka Iwu Ohm, ebili mmiri Iwu Kirchoff, na ọbụna ndị ụdị okirikiri eletrik, ọ ga -amasịkwa ịma ihe ọ bụ Faraday na -adịgide adịgide, ebe ọ nwere ike inyere gị aka ịmatakwu gbasara ibu.
N'isiokwu a, ị ga -enwe ike ịghọta ntakịrị ihe ihe bụ ọ blụ mgbe niile, kedu ihe enwere ike itinye ya n'ọrụ, kedu ka esi agbakọ ya ...
1 Gịnị bụ Faraday mgbe niile?
1.1 Gịnị bụ ahumachi?
1.2 Gịnị bụ ụgwọ eletrik?
2 Ngwa nke Faraday mgbe niile
3 Kedu ihe bụ electrolysis?
Gịnị bụ Faraday mgbe niile?
La Faraday na -adịgide adịgide a na -eji ya eme ihe mgbe niile na ngalaba physics na kemistri. A kọwapụtara ya dị ka ọnụego ọkụ eletrik n'otu mole nke elektrọn. Aha ya sitere n'aka ọkà mmụta sayensị Britain Michael Faraday. Enwere ike iji mgbatị a na sistemụ electrochemical gbakọọ oke ihe ndị na -eme na electrode.
E nwere ike iji akwụkwọ ozi nọchite anya ya F, a na -akọwa ya dị ka ụgwọ ụgwọ mmewere, inwe ike gbakọọ dị ka:
Ịbụ F uru kpatara nke Farday na -agbanwe agbanwe, yana ụgwọ ọkụ eletrik, yana Na bụ Avogadro na -agbanwe agbanwe:
Na = 6.02214076 × 1023 juru-1
Dị ka SI si kwuo, nke a Faraday a bụ nke ziri ezi, dị ka ihe ndị ọzọ na -agbanwe agbanwe, na ọnụ ahịa ya bụ: 96485,3321233100184 C / mol. Dịka ị pụrụ ịhụ, a na -egosipụta ya na nkeji C / mol, ya bụ, coulombs kwa mole. Na ịghọta ihe nkeji ndị a bụ, ọ bụrụ na ịmabeghị, ị nwere ike ịga n'ihu na -agụ ngalaba abụọ na -esote ...
Gịnị bụ ahumachi?
Un juru bụ otu na -atụba oke ihe. N'ime SI nke nkeji, ọ bụ otu n'ime ọnụọgụ asaa dị mkpa. Na ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ ihe mmewere ma ọ bụ kemịkal, enwere usoro nke mmewere mejupụtara ya. Otu ahumachi ga -abụ 7 6,022 140 × 7623 ụlọ akwụkwọ elementrị, nke bụ uru ọnụọgụgụ nke Avogadro na -agbanwe mgbe niile.
Ụlọ akwụkwọ elementrị ndị a nwere ike ịbụ atọm, molekul, ion, electron, photons, ma ọ bụ ụdị ihe ọ bụla ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, site na nke a ị nwere ike gbakọọ ọnụ ọgụgụ nke atọm ihe dị na gram nke ihe enyere.
Na onwu, ahumachi bụ ihe dị mkpa, ebe ọ na -enye ohere ịme ọtụtụ mgbako maka ihe mejupụtara, mmeghachi omume kemịkal, wdg. Dịka ọmụmaatụ, maka mmiri (H2O), ị nwere mmeghachi omume 2 H2 + Ọ2 H 2 H2O, ya bụ, ntụpọ abụọ nke hydrogen (H2) na otu ahịrị oxygen (O2) meghachi omume iji mepụta ntụpọ mmiri abụọ. Ọzọkwa, enwere ike iji ha gosipụta uche (lee molarity).
Gịnị bụ ụgwọ eletrik?
N'aka nke ọzọ, site na ọkụ eletrik Anyị ekwuola n'oge ndị ọzọ, ọ bụ ihe anụ ahụ dị n'ime nke ụfọdụ akụkụ subatomic nke na -egosipụta ike na -adọrọ adọrọ ma na -asọ oyi n'etiti ha n'ihi mpaghara elektrọnik. Mmekọrịta elektrọnik, n'etiti ụgwọ na ọkụ eletrik, bụ otu n'ime mmekọrịta 4 dị mkpa na physics, yana ike nuklia siri ike, ike nuklia na -adịghị ike, na ike ndọda.
Iji tụọ ụgwọ ọkụ eletrik a, Coulomb (C) ma ọ bụ Coulomb, a na -akọwapụta ya dị ka ụgwọ a na -eburu n'otu sekọnd site na ọkụ eletrik nke ike otu ampere.
Ngwa nke Faraday mgbe niile
Ọ bụrụ na ị na-eche ihe ngwa bara uru Ị nwere ike ịnwe Faraday a oge niile, nke bụ eziokwu bụ na ị nwere ole na ole, ụfọdụ ọmụmaatụ bụ:
Igwe eletriki / anodizing: maka usoro dị na ụlọ ọrụ metallurgical ebe a na -ekpuchi otu ọla na nke ọzọ site na electrolysis. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ejiri galọn kpuchie ya na akwa zinc ka ọ nwee ike iguzogide nsị. N'ime usoro ndị a, a na -eji ọla a ga -ekpuchi dị ka anode na electrolyte bụ nnu na -agbaze nke ihe anode.
Nchacha ọla: enwere ike tinye ya n'ọrụ na usoro eji emecha ọla dị ka ọla kọpa, zinc, tin, wdg. Ọzọkwa site na usoro electrolysis.
Nrụpụta kemịkal: iji mepụta ogige kemịkal, a na -ejikarị ihe a eme ihe.
Nnyocha kemịkal: site na electrolysis enwere ike kpebisie ike mejupụtara kemịkal.
Mmepụta gas: gas dị ka oxygen ma ọ bụ hydrogen nke enwetara site na mmiri site na electrolysis na -ejikwa nke a maka mgbako.
Ọgwụ na aestheticsEnwekwara ike iji electrolysis kpalie akwara ụfọdụ ma ọ bụ gwọọ nsogbu ụfọdụ, na mgbakwunye na iwepụ ntutu na -achọghị. Na -enweghị agbanwe agbanwe, enweghị ike imepụta ọtụtụ ngwaọrụ nke ụdị a.
Bipute: Maka ndị na -ebi akwụkwọ, a na -ejikwa usoro electrolysis maka ihe ụfọdụ.
Ndị na -enye ọkụ eletrik: akụrụngwa elektrọnik a ma ama nke nwere obere ihe nkiri nke aluminom oxide na anode aluminom n'etiti electrodes. Electrolyte bụ ngwakọta nke acid boric, glycerin, na ammonium hydroxide. Ma otu a ka esi enweta nnukwu ikike ndị ahụ ...
Kedu ihe bụ electrolysis?
Ebe ọ bụ na njikọ Faraday nwere njikọ chiri anya electrolysisKa anyị hụ ihe okwu ọzọ a bụ nke a na -eji ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ. N'ihi usoro a, ọkụ eletrik nwere ike ikewapụ ihe nke ihe mejupụtara. Emere nke a site na mwepụta nke elektrọn site na anion anion (oxidation) na njide nke elektrọn site na cations cathode (mbelata).
William Nicholson chọpụtara ya n'amaghị ama, n'afọ 1800, mgbe ọ na -amụ ọrụ nke batrị kemịkal. N'afọ 1834, Michael Faraday mepụtara ma bipụta iwu nke electrolysis.
Ka ihe atụ, electrolysis nke mmiri H2O, na -enye ohere ịmepụta oxygen na hydrogen. Ọ bụrụ na etinyere ọkụ ugbu a site na electrodes, nke ga -ekewa ikuku oxygen na hydrogen, wee nwee ike ikewapụ gas abụọ (ha enweghị ike ịbata, ebe ọ bụ na ha na -emepụta mmeghachi ihe mgbawa dị oke egwu).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » mmụta » Oge Faraday: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụgwọ ọkụ